Valifaty sa Fifamelana? – MyDago.com aime Madagascar
Fandraisan'ny vahoaka azy telolahy teo amin'ny kianjan'ny Magro
Tafavoaka ny fonja soamantsara ireo mpitari-tolona telo mirahalahy, Fetison Rakoto Andrianirina, Zafilahy Stanislas, Edouard Tsarahame na dia mbola sazy mihantona aza aloha hatreto no nomen’ny fitsarana azy telo mirahalahy .13 volana hoan’Ingahy Fetison, 10 volana avy ny azy mirahalahy ambiny.
Niaraka nivoaka tamin’izy ireo ihany koa ny mpitolona hafa niaraka « dossier » tamin’izy ireo izay miisa 16 ka nahazo sazy mihantona amam-bolana ihany koa.
Fifaliana ny an’ireo mpandala ny ara-dalàna vory lanina teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka nandray ireto mahery fony.Nisy ny hafatra nampitain’izy ireo tamin’izany.
Raha nandray fitenenana ny filohan’ny delegasiona Ravalomanana dia nilaza fa hisafidy ny fifamelana sy fihavanana izy telo mirahalahy, na dia tokony ho ny valifaty aza no mendrika ny FAT.
Ho an’ireo olona voafonja marobe noho ny tsy rariny mbola voatana an-tranomaizina dia takin’ireto mpitari-tolona ireto ihany koa ny hamoahana haingana azy ireo, na sivily na miaramila izany.
Na dia nogadraina tany am-ponja aza izahay hoy Andriamatoa Fetison Rakoto Andrianirina dia mahalala ny fijalianareo vahoaka, amin’ny fiakaran’ny vary sy ny vidin’ny solika. Nohazavainy tamin’ireo vahoaka marobe ihany koa fa vokatry ny tsy fahazoana ny fankatoavana iraisam-pirenena sy ny tsy fisian’ny famatsiam-bola vahiny no mahatonga izany fiakaran’ny vidim-piainana izany, koa nanome tsindrom-paingotra sahady an’i Andry Rajoelina izy ny mba tsy hiziriziry sy tsy mety mamaha olana , izahay hoy izy dia vonona hatrany hanohy ny fifampidinihana hamahana ity krizy lava reny ity.
Nisaraka tamim-pilaminana toy ny mahazatra moa ny fivoriana niavaka teo an-kianja na dia efa somary hariva ihany aza vao tafasaraka.
Auteur Solo RazafyPublié le 9 février 2011 9 février 2011 Catégories Magro, Malagasy, PolitiqueÉtiquettes Prisonniers politiques
2 réflexions sur « Valifaty sa Fifamelana? »
Fifamelàna sy fihavanana ???? Tsy afaka, na tsy avelan’ny mpanongana hitolona intsony ry zareo, koa dia tsara tso-drano ry zareo hikarakara ny vady aman-janany amin’izay!!
Aoka ny hafa indray no atao kapiteny sy hitondra ny baolina !!!
11 février 2011 à 4 h 06 min
Raha izay ratsy vita izay aloha dia personnellemnt izahay mianakavy TSY MAMELA é. Avy eo ny resaka politika tsy haiko.
Précédent Article précédent : La Hat a tellement hâte que Simao et son équipe reviennent…
Suivant Article suivant : 4 videos chocs – 09/02/2011 – Anosy -> Ambatolampy -> Magro !